गफ ! .....: गफ : फर्केपछिको कुरा
Posted by दीपक जडित at 4:45 AM
ओहो ! नेपाल आएर फर्किसक्नुभएछ है ! केही छैन, अब त ब्लग रेगुलर होला नि ! यो बन्द र हड्ताल बाहेक अरु सबै त राम्रो छ नि है, नेपाल को !!!
गज्जबको कविता यार! यो कविता पढेपछि मैले त तपाईँसंग भलाकुसारी नगरेको धेरै भएको भन्ने कुरानै बिर्सिएँ। अरु कोसेलीको प्रतीक्षामा मुख बाएर बसेको छु है:)
यो सटीक-सुन्दर कविताको शीर्षक 'समय' कसो होला?
नेपालको 'हावापानी' त यस्तै हो भनेर तयारी सोच लिएर आउनुभएको भए वेश हुनेथ्यो शायद । यस्तै हो यहाँ भन्ने चित्त बुझ्ने बाटो हुन्थ्यो । आउँदा बाजा बजाएर आउनुभयो, जाँदा सुटुक्क हराउनुभयो । शायद कसैलाई वियोगको चपेटा दिन रुचाउनुभएन वा परिस्थीति नै त्यस्तै थियो ।
ब्लग लेखनको कुरा त सुयोग मिल्दा जीवनबोध गर्ने कुरा भयो, प्रतिकूलतामा वा आत्मीयजनसँगको संलाप छाडेर यसैमा हराउने कुरै आउँदैन । अब फेरि ब्लग-पुल मार्फतको नाता डोरिने नै छ ।
कविता २०५७ सालको भए पनि ६७ सलसम्मै अझ यो भन्दा बढ्ताको आयु बोकेर आएको झलक मिल्यो ।
बिदाका रमाइला खुराकहरुको पोको बिस्तारै खुल्नेछ भन्दा निकै खुसि लाग्यो दीपक जी। मिलन बिछोडको जिन्दगीमा भाग्यको डोरोमा कसिनु नै हाम्रो दायित्व रहेछ।
करिब दशक पार गरेको कविता भएपनि शताब्दीयौ बाचिरहने खालको लाग्यो मलाई।
वेद नाथ पुलामी said...
धारावाहिक हो क्यारे ..............
दिपक दाइ थोरै शब्द द्रारा पनि ठुलो ठेस दिन सक्नु भा'छ ! निकै गजब को लाग्यो !
आउन पनि गज्जबको साईतमा आइपुग्नु भएछ यसपाला। जाँदा आउँदा दुवै वेलामा देशको 'हावापानी' विग्रेको थियो ।
म सोच्दैथिए जाने बेलामा एक पटक भेटसम्म गरौंला भनेर तर यसपाला यस्तै रह्‍यो ...।
अनि कविताको भने माथी साथीहरुले भनिसक्नु भयो । नेपालको ईतिहास हैन वर्तमान र भविष्य पनि छ त्यसैमा ।